Inuyasha the Movie 3: Swords of an Honorable Ruler (2003) – MMANIME
映画犬夜叉 天下覇道の剣 20 December 2003
Not Rated 2003 1 h 39 min Action, Adventure, Animation, Fantasy, Thriller
Akio Otsuka, Cho, Houko Kuwashima, Kappei Yamaguchi, Ken Narita, Kikuko Inoue, Kōji Tsujitani, Kumiko Watanabe, Mamiko Noto, Satsuki Yukino
ဒီကားက တော့ ခွေးမင်းသားဖန် တွေအကြိုက် တွေ့ စေမယ့်ကားပါ။ ဒီကားရဲ့ဇာတ်လမ်းဟာ ခွေးမင်းသားအဖေရဲ့ နှစ်ရာ ကျော်တိုင်ပျောက်ဆုံး နေတဲ့ပြိုင်သူကင်းဓါး ပေါ် အခြေပြုထားတာပါ။ အဲ့ဒီဓါးဟာ တက်ဆိုင်းဂဓါးနဲ့၊ ဆက်ရှိးမာရုကိုယ်တိုင်ပါ ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်တာတောင် အနိုင်မယူနိုင်တဲ့ဓါးပါ။ ခွေးမင်းသားရဲ့အဖေ မဟာ ခွေးမိစ္ဆာကြီးတိုဂဟာ(သူ့နာမည်အတိအကျကို မန်ဂ မှာရော၊ anime မှာပါ သေချာမဖော်ပြခဲ့ပါ) လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်၆၀၀တုန်းက သူ့ ခေတ်သူ့အခါတုန်းက မိစ္ဆာတွေ ရဲ့ လေးစားမှုကိုရခဲ့ပြီး ပြိုင်ဘက်ကင်းတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ခဲ့ကာ နိပွန်(ဂျပန်)နိုင်ငံရဲ့အ နောက်ဘက်အခြမ်းမှာ သြဇာ ညောင်းခဲ့သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ခွေးမင်းသားရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ခွေးမင်းသမီးစီးရီးရဲ့အဓိကဗီလိန်ဖြစ်သူ ခီလွင်မာရုဟာ နိပွန်နိုင်ငံရဲ့အရှေ့ဘက်အခြမ်းကိုအုပ်စိုးခဲ့တဲ့မဟာမိစ္ဆာကြီးဖြစ်ပြီး မဟာ ခွေးမိစ္ဆာကြီးတိုဂကိုရှုးနိမ့်ဖူးကာ ဘယ်ဘက်ဦးချိုနဲ့ညာဘက် ခြေ ထောက်ပါဆုံးရှုးခဲ့ပါတယ်။ ဒါ ပေမဲ့ ခရစ်သက္ကရာဇ် ၁၀၀၅ခုနှစ်မှာ တော့ နှစ်၅၀၀တစ်ကြိမ် ကမ္ဘာ ပေါ်ကိုကျ ရောက်လာမယ့် မိစ္ဆာကြယ်တံခွန်ကြီးရဲ့ကပ် ဘေးကြီးကို တော့ တိုဂနဲ့ခီလွင်မာရုတိုဟာ အတူတူပူး ပေါင်းပြီးကာကွယ်ခဲ့ပါတယ်။ ခမာခုလွ ခေတ်ကို ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ တော့ မဟာ ခွေးမိစ္ဆာကြီးတိုဂဟာ သူ့ရဲ့ဒုတိယဇနီးဖြစ်လာမယ့် မင်းသမီး အီဇယိုအီနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ကာ မင်းသမီးကိုကာကွယ်နိုင်ဖိုအတွက် နောင်တချိန်မှာ သူ့ရဲ့နာမည် ကျော်ဓါးဖြစ်လာမယ့် တက်ဆိုင်းဂဓါးကို တိုတိုစိုင်းအား ထုလုပ်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီ နောက်မှာ တော့ မဟာ ခွေးမိစ္ဆာကြီးတိုဂဟာ တက်ဆိုင်းဂဓါး၊ တန်ဆဲဂဓါးနဲ့စွန်းဂဓါးသုံးလက်ကိုကိုင် ဆောင်မိစ္ဆာ တွေ၊ ရန်သူ တွေ ကို အောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သူ ဆင်နွှခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲ တွေထဲမှာဂျပန်နိုင်ငံကို ကျူး ကျော်လာတဲ့ အရှင်ဟျိုဂနဲ့သူ့ရဲ့သား မဲနိုမာရုတိုဦး ဆောင်တဲ့မွန်ဂိုစစ်တပ်ကြီးကို နှိမ်နင်းတဲ့တိုက်ပွဲ၊ သစ်နက်မိစ္ဆာ တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တဲ့တိုက်ပွဲ၊ တရုတ်ပြည်က နေ ရောက်လာတဲ့ပိုးဖလံမိစ္ဆာ ကောင် တွေကိုနှိမ်နင်းတဲ့တိုက်ပွဲ တွေဟာ အထူး ကျော်ကြားပါတယ်။ တိုက်ပွဲအလီလီနွှလာခဲ့တဲ့ မဟာ ခွေးမိစ္ဆာကြီးတိုဂဟာ တ နေ့မှာ တော့ ယိုခို စေးမိစ္ဆာကြီးနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး ယိုခို စေးကိုချုပ် နှောင်နိုင်ခဲ့ ပေမဲ့ ဒဏ်ရာအကြီးအကျယ်ရသွားခဲ့ပါတယ်။ သူဒဏ်ရာရ နေချိန်မှာပဲ မဟာ ခွေးမိစ္ဆာကြီးတိုဂရဲ့ရင် သွေး အင်နူယာရှာကို ကိုယ်၀န်လွယ်ထားတဲ့ မင်းသမီးအီဇယိုအီကို တဖက်ချစ်ကြိုက် နေတဲ့ တခဲမာရုဟာ မင်းသမီးကိုရန်ပြုလာတာ ကြောင့် မဟာ ခွေးမိစ္ဆာကြီးတိုဂဟာ သွား ရောက်တားဆီးပြီး မင်းသမီးအီဇယိုအီကိုကယ်ထုတ်တဲ့အချိန်မှာပဲ မင်းသမီးရဲ့အိမ် တော်မီး လောင်ပြီးပြိုကျတဲ့အထဲပါသွားကာ ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ မဟာ ခွေးမိစ္ဆာကြီးတိုဂဟာ သူမကွယ်လွန်ခင်ကတည်းက သူ့ရဲ့ဓါးသုံးလက်ထဲက လူ့ လောကကိုကိယ်စားပြုတဲ့ တက်ဆိုင်းဂဓါးကို သူ့ရဲ့သားငယ် လေး အင်နူယာရှာကို ပေးအပ်ဖိုစီစဥ်ခဲ့ပြီး ကောင်းကင်ဘုံကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ တန်ဆဲဂဓါးကို သားကြီးဖြစ်သူ ဆက်ရှိးမာရုကို ပေးအပ်ဖိုစီစဥ်ခဲ့ ပေမဲ့ ငရဲကိုကိုယ်စားပြုတဲ့ကပ် ဘေးကြီး စွန်းဂဓါးကို တော့ ဘယ်သူ့ကိုမှမ ပေးအပ်ခဲ့တာ ကြောင့် သူ့ရဲ့ နောက်လိုက်တပည့် တွေဖြစ်တဲ့ မြိုဂနဲ့ ဆာယာတိုဟာ မဟာ ခွေးမိစ္ဆာကြီးတိုဂကွယ်လွန်သွားပြီးတဲ့ နောက်မှာ ကပ် ဘေးဓါးကြီးကိုချိတ်ပိတ်ချုပ် နှောင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့လိုချိတ်ပိတ်ချုပ် နှောင်တာ နှစ်၂၀၀ကြာသွားပြီးတဲ့ နောက်မှာ တော့……
ကျန်တာ တော့ ပရိသတ် တွေကိုယ်တိုင်ပဲ ခွေးမင်းသားတတိယ မြောက်ကားဖြစ်တဲ့ ခွေးမင်းသား – အရှင်သခင် ကောင်းရဲ့ဓါးဆိုတဲ့ဇာတ်ကားမှာဆက်ပြီးရှုစားကြပါ။
ခွေးမင်းသားရုပ်ရှင် တွေကို စီးရီးရဲ့ဘယ်အပိုင်း တွေမှာ ကြည့်ရမှာလဲသိချင်သူများအတွက် ဘယ်အပိုင်းအပြီးမှာ ကြည့်ရမလဲဆိုတာပါ ရေး ပေးလိုက်ပါတယ်
InuYasha The Movie 1: Affections Touching Across Time ကို ဇာတ်လမ်းတွဲရဲ့အပိုင်း၅၄အပြီး
InuYasha The Movie 2: The Castle Beyond the Looking Glass ကို ဇာတ်လမ်းတွဲရဲ့အပိုင်း၉၅အပြီး
InuYasha The Movie 3: Swords of an Honorable Ruler ကို ဇာတ်လမ်းတွဲရဲ့ အပိုင်း၁၃၆အပြီး
InuYasha The Movie 4: Fire on the Mystic Island ကို ဇာတ်လမ်းတွဲရဲ့အပိုင်း၁၆၇အပြီး Final arcမစခင်မှာအသီးသီးကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်
ရုပ်ရှင်တွေကိုမကြည့်ပဲ နေလိုရသလားဆို တော့
ဒုတိယကားကလွဲရင် ကျန်ကားတွေမကြည့်လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးဗျ။ အဲ့တော့ ဖန် တွေရဲ့ သဘောပါပဲ
* HEVC BD 1080p FLAC ကို PC/Phone များတွင် VLC player ဖြင့်သော်လည်းကောင်း ၊ TV များတွင် Smart TV ( HEVC Supported )ဖြင့် ကြည့်ပါ *
File size…(4.51 GB) , (1.64 GB) , (995 MB) and (444 MB)
Quality…Blu-Ray 1080p FLAC (HEVC Encode), 1080p 5.1 , 720p & 480p
Format…mkv / mp4
Encoder….Min Khant Zaw
Translated & Reviewed by Dr.Nyan
Akio Otsuka Cho Houko Kuwashima Kappei Yamaguchi Ken Narita Kikuko Inoue Kōji Tsujitani Kumiko Watanabe Mamiko Noto Satsuki Yukino
Akio Otsuka Cho Fumihiko Tachiki Houko Kuwashima Kaneta Kimotsuki Kappei Yamaguchi Ken Narita Kenichi Ogata Kikuko Inoue Kōji Tsujitani Kumiko Watanabe Mamiko Noto Satsuki Yukino Yasunori Matsumoto
Option 1 Direct Download Server 4.51 GB HEVC BD 1080p FLAC
Option2disk.yandex.com 4.51 GB HEVC BD 1080p FLAC
Option3usersdrive.com 1.64 GB BD 1080p 5.1
Option4yoteshinportal.cc 1.64 GB BD 1080p 5.1
Option5megaup.net 1.64 GB BD 1080p 5.1
Option6disk.yandex.com 1.64 GB BD 1080p 5.1
Option7Direct Download Server 1.64 GB BD 1080p 5.1
Option 8 usersdrive.com 995 MB BD 720p 5.1
Option9yoteshinportal.cc 995 MB BD 720p 5.1
Option 10 megaup.net 995 MB BD 720p 5.1
Option 11 disk.yandex.com 995 MB BD 720p 5.1
Option 12 usersdrive.com 444 MB 480p
Option 13 yoteshinportal.cc 444 MB 480p
Option 14 megaup.net 444 MB 480p
Option 15 disk.yandex.com 444 MB 480p
Option 1 streamlare.com Myanmar Subtitle (Hardsub) 1080p
Option2streamsb.com Myanmar Subtitle (Hardsub) 720p / 360p
It is perfect time to make some plans for the future and it is time tobe happy. I’ve read this post and if I could I desire to suggest youfew interesting things or suggestions. Maybe you can write next articles referring tothis article. I want to read more things aboutit!
Zachery Orouke says:
Very nice style and design and wonderful subject material , very little else we want : D.
Excellent post. I used to be checking continuously thisweblog and I am impressed! Very helpful info specially the last part 🙂I deal with such informationalot. I was seeking this certain info foralong time.Thanks and best of luck.
I’m satisfied to findalot of useful info right here in the put up, we need work out extra techniques on this regard, thank you for sharing.